Ny fomba Antemoro
Ny fomba Antemoro rehefa misaraka am-panambadiana
Rehefa manontany andro tsara any amin'ny ombiasy ny lehilahy, izany hoe izay andro mitondra vintana, malaky ahitan-dahy vady faingana, dia izay tompom-bady ihany no mandroaka ny vadiny. Fomba ihany koa raha ny rafozam-bavy na ny zao-bavy no mandroaka. Ity farany ity aza no matetika fanao. Dia amin'ny avy misakafo amin'ny atoandro no ilazana ny fandroahana, ka toy izao no teny fanao raha ny rafozana no mandroaka:
«Misaraka kely (aloha) ianareo, endriko (Ramatoa) fa izany no tenin'nt vadinao; nefa hafoiny ela any moa ianao, fa avelao kely (aloha) izy hanody (hanatanteraka) ny sitrapony, fa biby ny lehilahy ka tsy maty an-kazo tokana».
Tsy misy teny avalin'ny roahina, fa na dia mandeha mody any amin'ny ray amandreniny izy, rsy misy mpanatitra. Loza ihany ny manjo ilay zazavavy amin'ny hampandrenesany izao toe-javatra izao ny fianakaviany, fa sady voalatsa no menatra olona.
Amin'ny fianakaviana vanona dia mba lasan manatona ny fianakavian-dehilahy ihany ny rainy mamotopototra ny antony nisarahana tampoka toy izao. Nefa mampiova inona moa izany!
Dia any an-tranon-drainy amandreniny kosa ny roahina no manontany ombiasy izay vintana tsara, dia andro malaky mampahita vavy vady aingana, hakany nyentany fony izy nampakarina, sy ny rary nataony fony izy tao an-tokantranony fa ny fananana niombàna dia tsy anànany fahatelon-tànana; izay mba lehilahy antra no manome vary akotry in-telo na in'efatry ny vata famarana.
Raha manan-janaka izy mivady, dia ny vavy ihany no mamelona ny zaza na firy na firy, mandritra ny andro isarahana. Tsy misy fanampiana avy amin'ny lehilahy. Noho izany, maro izay tratra ny zaza kamboty velon-dray eto amin'ny Antemoro.
Ity indray no mampalahelo. Raha hita lehibebe mahazo manampy an-dreniny amin'ny asa ny zaza dia alain-drainy ka dia miala maina ny renin'ny zaza.
Mandraka ny efa sorisorena izaitsizy toy izany ny vavy dia teren'ny fomban-drazana ho tapahin'ny lahy misaotra azy mamdra-panambadiny hafa indray.
Saropiaro lozantany ny lehilahy Antemoro, ka loza no manjo azy miambina io vady nisaorana io. Amin'ny firaisan'izy roa ivelan'ny fanambadiana ka mitoe-jaza ny vavy, dia dia teren'ny fomban-drazana kosa ny lahy hampody azy na tiany na tsy tiany, eny na dia tsy ankasitrahan'ny fianakaviany aza. Arian'ny Fokonolona tsy anisan'ny firenena intsony izay mandika izany.